ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှု - Come4Buy eShop
$ 7.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ - $ 53.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Standard Type အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း အမျိုးအစား အင်္ဂါရပ်များ ဘက်စုံသုံး ထွင်းထုဘောပင်ကို မုတ်ဆိတ်မွေးနှင့် မျက်ခုံးမွေးရိတ်ခြင်းအတွက် ကွဲပြားခြားနားသော ဆံပင်ပုံစံနှင့် အသွင်အပြင်ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သိမ်မွေ့သောဘောပင်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ....
အဆင့်မြှင့်ခြင်းအမျိုးအစား စံအမျိုးအစား အခြေခံပညာအမျိုးအစား ရိုးရှင်းသောကလောင် ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
အကောင်းဆုံး Curlers Tool Rollers မှာ...
အကောင်းဆုံး Curlers ကိရိယာ ဤ rollers နှင့် curlers များသည် သင့်ဆံပင်ကို ကြွခြင်း၊ ကောက်ကြောင်းများနှင့် လှိုင်းများကို အလွယ်တကူ ထူးခြားဆန်းသစ်သော စတိုင်လ်ကို ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။ ဒီသဘာဝဆံပင်ပုံစံနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ မလိုပါဘူး...
75cm 18PCS။ 65cm 18PCS။ 55cm 18PCS 50cm 18PCS 45cm 18PCS 40cm 18PCS 20cm 18pcs. ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
အိမ်မှာ အလွယ်တကူ လိပ်ပြီး ဆံပင်ကောက်ရတဲ့ DIY Magic Hair Curler အိမ်မှာ အလွယ်တကူ လိပ်ပြီး ဆံပင်ကောက်တဲ့ DIY Magic Hair Curler က လွယ်ပါတယ်...
25cm x 12pcs။ 30cm x 12pcs။ 45cm x 12pcs။ 55cm x 12pcs။ ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
DIY Magic Hair Curler အိတ်ဆောင်...
မှာစတင်ခြင်း $ 39.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
DIY Magic Hair Curler အိတ်ဆောင် ဤ curlers များသည် သင့်ဆံပင်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ လိပ်ပြီး ဆံပင်ကောက်နိုင်ပြီး ထူးခြားသော ဖက်ရှင်စတိုင်လ်ကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဓာတုပစ္စည်းများမပါဘဲ ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်း ပုံဖော်နိုင်သည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော...
55cm x 40PCS။ 45cm x 40PCS။ ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
DIY Styling Hair Rollers ကောက်ကြောင်း...
အရောင်- ပန်းရောင် ပစ္စည်း- အလူမီနီယမ်ဝိုင်ယာ၊ ရေမြှုပ်၊ ပိုလီစတာ စတိုင်များ- အစက်များ အရွယ်အစား- 20.3*4.1cm/8*1.6 လက်မ (ခန့်မှန်း) အလူမီနီယမ်ကြိုး အရှည်- 6.5cm/2.5လက်မ (ခန့်မှန်း) အင်္ဂါရပ်- ဆံပင်ညှပ်စက် အားသာချက် -- လွယ်ကူသည် ဝတ်စုံသုံးဖို့...
10pcs ပန်းရောင်ဆံပင်ကြိတ်စက် 30pcs ပန်းရောင်ကြိတ်စက်နှင့် အိတ် 30pcs အပြာရောင် Roller နှင့် Bag 30pcs အနက်ရောင် Roller နှင့် Bag ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး ဂျပန် 440c6'' အနီရောင်ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး ဆံပင်ညှပ်ပါးလွှာသောဆံပင်ညှပ်အမှတ်အသားညှပ်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ဆံပင်ညှပ်ဆံပင်ညှပ်ကပ်ကြေး
ပါးလွှာသော ဖြတ်တောက်ခြင်း Set =2Pieces ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
$ 19.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 26.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဖော်ပြချက်- 1. လှိုင်းအလျား၏ ပျော့ပျောင်းသော အနီအောက်ရောင်ခြည်သည် သင့်သွေးလည်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သောကြောင့် အောက်ဆီဂျင်နှင့် အာဟာရဓာတ်များကို ဆံပင်မွေးညင်းပေါက်များဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး ဆံပင်ကို တားဆီးရန်...
$ 39.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 49.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
5 in 1 Set Hair Dryer ဘက်စုံသုံး ဆံပင်အခြောက်ခံစက် ခေါင်းဖြီးနှင့် တည့်တည့် Dual-Purpose Hot Air Comb Professional Hair Dryer Power Supply- အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဗို့အား/ပါဝါ- 220 -240V / 900W/ Input voltage: 220V/ 50/60Hz Diameter...
ခရမ်းရောင် ယူရို ပန်းရောင် ဥရောပစံ ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Ceramic Curling Iron Rose Gold Conical Curling Iron Ceramic Curling Iron သည် Insulated Gloves Tourmaline ကြွေထည်အပူပေးပြွန်ကို ပေးပို့ရန်၊ အပူကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ရင်းနှီးသော အပူလျှပ်ကာနှင့် မီးလောင်မှု ဆန့်ကျင်ခြင်း ဒီဇိုင်း၊ ကြွေ...
ဥရောပပလပ် ဘောဂင် တိန်ပလပ် ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Mini Straightener USB Hair Straightener Wireless Car Charging Mini Electric Splint Curling And Straightening Dual-use Bangs Curling Iron .ကျစ်လစ်သော ကိုယ်ထည်ကို သင်နှင့်အတူ ယူဆောင်သွားနိုင်သော USB အားသွင်းနည်းလမ်းမှာ...
အနီရောငျ ပုလဲဖြူ ကျက်သရေ ခရမ်းရောင် ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Old Fashion Manual Clipper Haircut Old Fashion Manual Manual Clipper ဆံပင်ညှပ် Hand Push Low Noise Non-Electric Hair Cutter. အင်္ဂါရပ်- အရောင်- ငွေရောင် ပစ္စည်း- သတ္တု ခုတ်ထစ်ခြင်း အင်အား၊ ဆူညံမှု နည်းပါးခြင်း။ ဆန်းပြားသောအသွင်အပြင်၊ ထူးခြားသောပုံစံ....
Professional Japan 4cr6လက်မ...
ကတ်ကြေးဆံပင်ညှပ်ပညာရှင်ဂျပန် 4CR ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး ဆံပင်ညှပ်ပါးလွှာသောဆံပင်ညှပ်ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး Set တွင်ပါဝင်သည် : 1 အပိုင်းအစဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေး 1 အပိုင်းပါးလွှာကပ်ကြေး
ဖြတ်တောက်ခြင်း အစုံ ပါးလွှာသော ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ